Tenga Melengestrol acetate powder (2919-66-6) hplc =98% | AASraw
/ Products / Madzimai eHormoni / Melengestrol acetate upfu
Rating: SKU: 2919-66-6. Category: Madzimai eHormoni
MASHOKO aya ane maitiro ekugadzira uye kugadzira zvigadzirwa kubva ku gramu kusvika pakukura kweMelengestrol acetate powder (2919-66-6), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Melengestrol acetate powder (INN, BAN) inonzi steroidal progestin uye antiineoplastic agent iyo isina kutengeswa. dzimwe nguva dzakaputirwa seMGA. Izvo hazvibvumirwi kushandiswa nevanhu, uye zvinoshandiswa sekuwedzera kwekudya kuderedza kukura kwemombe. uye inoshandiswa sekudzivirira kwemishonga inogadziriswa yemhuka dzakabatwa muzvinyorwa uye dzimwe dzimba, ..
Molecular Kurema: 396.52
Melt Point: 202-204 ° C (kuvhenekerwa.)
Color: Chiedza chine pfupa
Zvimwe Zvinyorwa Pamusoro peMelengestrol acetate powder waunoda kuziva
Chii Chinoshandiswa NaMeengestrol acetate powder
Melengestrol acetate powder (MGA) inoratidzira muromo progesational steroid inoshandiswa pakuvandudza kukura kwekuwedzera uye kudyidzana kwekufambiswa kwekudya. Pamwe nekudzivisa oestrus mumombe dzenzombe. Hazvibvumirwi kushandiswa mune chero ipi zvayo. MGA ndiyo chete mishonga yerudzi rwayo iyo inotarisirwa mumhuka yekudya, Izvo zviyero zvinotenderwa zvinonzi 0.25 kusvika 0.50 mg / heifer / zuva. Melengestrol acetate powder inodyiswa kwenguva ye fattening / kupedza nguva, kazhinji 90 kune mazuva 150. Kuzvidzivirira kutora kwemazuva 2 vasati vaurawa kunoshandiswa kumhuka chero ipi zvayo inotarisirwa MGA.
Melengestrol acetate powder yakambove yakarongerwa pamusangano we54th weKomiti, uye nguva yenguva yakareba yemiganhu (MRLs) yakakurudzirwa. Aya maMLM echinguvana aiva 5 μg / kg yemafuta emombe uye 2 μg / kg nokuda kwechiropa chechiropa. Mukusvika pakuita chisarudzo cheMRL, Komiti yakakurukura zvinhu zvinotevera:
- ADI ye0-0.03 µg / kg yehuremu hwemuviri yakagadzwa, inova yakaenzana neAdhi yepamusoro ye1.8 µg ye
- Mafuta chete nechiropa chete zvine zvimiro zvemakango zvakasarudzika izvo zvinogona kuwanda pane zvakajairwa; nzira
nemiganhu ye quantification inopfuura 0.3 μg / kg haigoni kubvumira quantification yemasara mumasumbu kubva
mhuka dzakabatwa nedzidzo dzakakurudzirwa dzeMelengestrol acetate powder.
- Vatsigiri havana kuendesa nzira yekuongorora yakakodzera kukosheswa.
Nokudaro, Komiti yakurudzira maRML ekanguva uye yakakumbira mashoko anotevera:
- Iyo nzira yekuongorora inokodzera kuyera zvasara zveMelengestrol acetate poda muchiropa uye mafuta matishu.
Mukupindura chikumbiro cheKomiti, mutsigiri akapa nzira yakasimbiswa yemakemikari yekuongororwa ne58th
Is Melengestrol acetate powder inoshanda
Mhedziso yemuromo menningenyl acetate (MGA) pane basa rekuvhara mazai yakadzidzwa muChNUMX maziwa nemhou. Zvose zve264 zvipfeko zvakagamuchira 98 mg MGA zuva rega kwechinguva chiduku (0.4 kusvika mumazuva 18), uye basa rerovary rakagadziridzwa nerectal palpation. Sezvo chiitiko chekucherechedza corpus luteum yakaderera kubva pa 32% kusvika ku76%, kuonekwa kwemapurisa yakaitika kubva ku 10% kusvika ku56%. Huru follicle ukuru hunowedzerawo kupfuura nguva. Cervical mucus samples yakarongerwa maererano nemhando yefern, iyo yakashandurwa semhaka yekushungurudzika kweesrogenic uye yakaitika munguva yekodpus luteum degradation, kunyange zvazvo Estrus uye ovulation zvakarambidzwa neMGA kurapwa.
Iyo yakazara ye166 mhou dzemombe dzakashandiswa mukureba-kwenguva refu kudzidza kweMGA kurapwa (105 kusvika 116 mazuva). Chinhu chakakosha (P <0.05) chakawanikwa muhuremu hwe follicular fluid, kunyanya kubva kune akakurisa mafollicles eaya maovari. Kuwedzera kweestrogen mazinga zvakare anoratidza kuyaruka, uye zviyero zveadrenal mune isina kugadzikana MGA-inorapwa mhuru inowedzera. Mushure mekurapwa neMGA, iyo inorema adrenal yejetted heifers inotanga kudzikira. Iyo yakakwana dhizeti yekuwedzera follicular chiitiko inoita kunge iri padyo ne0.4 mg yeMGA mazuva ese / tsiru.
Gara kure nechingwa, kunwa uye kudyirwa kwemhuka.
Ichi chinyorwa uye ndiro yacho inofanira kuiswa nenzira yakachengeteka.
Kupfeka zvipfeko zvakakodzera zvokudzivirira.
Kupfeka magirofu akakodzera.
echenesa pasi uye zvinhu zvose zvakasvibiswa nenyaya iyi, shandisa mvura uye detergent.
Kana ikamedzwa, IMMEDIATELY taura naDhictor kana Poisons Information Center. (ratidza mudziyo uyu kana kuti ikiti).
Dzivisa kusvibiswa - tora mirairo yakakosha usati waishandisa.
Dzingai zvinhu izvi uye nhumbi yayo pane zvinokuvadza kana kuti zvakakosha pakusanganiswa kwemarara.
Shandisa mudziyo wakakodzera kuti urege kusvibiswa kwezvakatipoteredza.
Dzivisa kusunungurwa kune zvakatipoteredza. Rondedzera kune zvakananga mirayiridzo / Chekuchengetedza dhiyabhorosi.
Kuti igoverwe mune ramangwana riri mberi
Nzira yekutenga Melengestrol acetate powder kubva kuAASraw